FX Turbo gooldhalinta Forex Tusiyaha - Forex Muujiyeyaasha Download
Home MT4 Muujiyeyaasha FX Turbo gooldhalinta Forex Tusiyaha
FX Turbo gooldhalinta Forex Tusiyaha
FX Turbo gooldhalinta Forex Tusiyaha waa tilmaamaha hufan in lagu talinayaa bilowga ah. Waxaa haboon in loo isticmaalo dhammaan lammaanaha lacagta. Si kastaba ha ahaatee waqtiga lagu taliyey oo fiican tilmaame u shaqeeyo waa wakhti 1-saac, laakiin waxa ay sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in wakhti kasta oo kale oo aad doorato, labadaba lulid ganacsiga iyo scalping.
Marka aad soo bixi xirmo ka kooban tilmaame this, oo waxay u iman iyadoo tilmaamayaasha kartoo dhowr lammaane lacagta. Waxaad si fudud u jiidi oo da'a Labada nin lacag kasta oo galay shaxda iyo tilmaame u shaqayn doono.
Waxaad arki doontaa in tani ay tahay mid ka mid ah tilmaamayaasha yar in loo isticmaali doono labada lulid ganacsiga iyo scalping ku xiran tahay xiliga cayiman ayaa in ganacsade la isticmaalayo. Marka ganacsade go'aansado in la isticmaalo wakhti aad u dhagan ka dibna tilmaanta waxay keeni doontaa in la siiyo calaamadaha badan ka dib dura waqti aad u gaaban halkan jidaynayey for scalping. Sidoo kale haddii ganacsade isticmaalaa dura waqti badan oo sida D1 iyo wixii la mid ah, tilmaanta siin doonaa calaamadaha dib dheer waqti jidaynayey for ganacsi muddada dheer.
Tilmaamahan, sida ugu of tilmaamayaasha kale awood ganacsade si aad u hesho digniino kala duwan marka ay jirto signal a. Si aad u hesho codka si toos ah iyo farriin heegan box markii FX ee Turbo gooldhalinta abuuraa signal a, waa in aad guji gashiga tab iyo 'SoundAlarm' qarka u saaran inuu True. tilmaame ayaa sidoo kale soo diro diri emails marka abuuraa Xirfado
iyo ama bixidda calaamadaha. Si kastaba ha ahaatee this by default la demiyo. Laakiin haddii aad u baahan tahay in la helo emails markii gooldhalinta FXTurbo Tusiyaha saartay signalada, awood Email Alerts. In ka 'gashiga' tab, set 'EmailAlarm' in True, ka dibna riix on "Tools 'iyo' Options 'ka dibna riix' Email 'tab ka dibna calaamadi sanduuqa" In loo sahlo "checkbox, weydii Bixiyaha Adeegga Internet (ISP) waa maxay faahfaahinta uu server email iyo ugu dambayntii riix 'Test ". Taas ka dib, waa in aad hesho email baaritaan aad mailkooda.
Tilmaamahan abuuraa iyo qaab fallaadho marka ay jiraan calaamadaha. arrow wuxuu noqon karaa mid cas ama huruud madow. signal cas muujinayaa hoos halka signal mugdiga jaallaha ah wuxuu muujiyaa uptrend ah.
lagugu tuday sawirka.1. FX Turbo gooldhalinta tilmaanta isticmaalaya 30 daqiiqo waqtiga.
Isticmaalka FX Turbo gooldhalinta tilmaanta ganacsiga.
A arrow huruud madow waa signal dheer, iyo fallaadh Red waa signal gaaban.
Sidaas ganacsade ah waa meel si iibiyay markii tilmaanta abuuraa arrow cas iyo iibsadaan si marka arrow huruud madow ahbaa. Amarada waa in lagu meeleeyaa ul shumac soo socda ama bar manidu ka dib on oo fallaadhiina waxay ka ahaa ahbaa on xiranto.
Waayo, waafaqid ugu badnaan iyo celinta wanaagsan waxaa lagu talinayaa in ganacsiga labada nin lacag kasta oo la version u dhigma of FX Turbo gooldhalinta ay. Tusaale ahaan: Haddii aad ku ganacsan USD / CAD ah, ganacsiga Turbo FX ee gooldhalinta ee USD labada / CAD.
Waxaa lagu talinayaa in ay baxdo ganacsiga sida ugu dhakhsaha badan FX ee Turbo gooldhalinta abuuraa signal ka soo horjeeda, i.e. muujinaysaa fallaadh midab ka soo horjeeda.
Laakiin waxaa wanaagsan u noqon doonaa haddii aad isticmaasho stop (qaadan faa'iido iyo khasaare joojiyo heerar) si loo yareeyo khasaaraha.
Fig.2. Furitaanka iyo xidhitaanka amarada la isticmaalayo FX Turbo gooldhalinta tilmaanta.
FX Turbo gooldhalinta Forex Tusiyaha waa Metatrader a 4 (MT4) tilmaame iyo nuxurka tilmaame Forex ee waa in aan baddalno xogta taariikhda wxbarashada.
FX Turbo gooldhalinta Forex Tusiyaha siinayaa fursad ay ku ogaan dhegyadii kala duwan iyo astaamaha isbedbeddelka sicirka kuwaas oo aan la arki karin in ay isha qaawan.
Sidee si loo soo dajiyo FX Turbo gooldhalinta Forex Indicator.mq4?
Download FX Turbo gooldhalinta Forex Indicator.mq4
FX Copy Turbo gooldhalinta Forex Indicator.mq4 aad Metatrader Directory / khubaro / tilmaamayaasha /
Right click on FX Turbo gooldhalinta Forex Indicator.mq4
Tusiyaha FX Turbo gooldhalinta Forex Indicator.mq4 waxaa laga heli karaa aad Chart
Sidee Xagga Metatrader saar FX Turbo gooldhalinta Forex Indicator.mq4 4 Chart?
FX Turbo gooldhalinta
article PreviousAuto Taxana Forecaster Forex Tusiyaha
Next articleTaxane ilaaliye Forex Tusiyaha